Kooxda tifaftirka | Cuntada Nutri
Cuntada Nutri waa degel Isbaanish ah oo diirada saaraya hagaajinta cuntada, caafimaadka iyo jir dhiska dhammaan adeegsadayaasheeda. Waxaa la aasaasay 2007, sidaas darteed abuurista sumcad la ilaaliyo mahadsaniddeena kooxda qoraalka in, wadaagista isla qiyamka iyo mabaadi'da, ay soo saaraan nuxur tayo leh toddobaadle ah.
Haddii aad xiiseyneyso ku soo biir kooxdayada qorayaasha khibrad leh, waad awoodaa buuxi foomka soo socda y waan la soo xiriiri doonnaa kula asap
Haddii aad rabto inaad aragto dhammaan mawduucyada aan soo sheegnay sannadihii la soo dhaafay iyo bilaabaan hagaajinta ladnaantaada hadda, waxaad eegi kartaa ah qaybaha bogga.
Daaweyn dabiici ah iyo xamaasad cunno caafimaad leh, waxaan jeclahay ka caawinta dadka inay u noolaadaan nolol caafimaad leh. Marka la isku daro cuntada saxda ah iyo jimicsiga jirka, waxaa suurtagal ah in sida ugu fiican loo qabto maalin walba, iyo wixii ka sarreeya, aad u faraxsanaato.
Waxaan jecelahay inaan fiiriyo nafaqada, jir dhiska iyo sifooyinka cuntada si aan xal ugu helin mushkilad laakiin aan ugu noolaado qaab nololeedkeyga. Guriga dhexdiisa waxaa naloo muujiyey habka loo maro cunno wanaagsan laga soo bilaabo da'da aad u yar, halkaas oo tayada lagu abaalmariyo wax kasta oo ka sarreeya. Sidaa awgeed xiisihii weynaa ee gastronomy iyo tayada wanaagsan ee cuntada ayaa kacday. Ilaa maanta waxaan ku noolahay baadiyaha, anigoo ku raaxeysanaya neef kasta oo hawo leh anigoo si farxad leh kuugu sheegaya wax walboo aad rabto inaad ka ogaato cuntada, cuntooyinka wanaagsan iyo daawooyinka dabiiciga ah.
Waxaan ku dhashay magaalada Malaga sanadku markuu ahaa 1965, waxaanan jecelahay adduunka nafaqada, iyo caafimaadka dabiiciga ah. Cuntada ayaa muhiim u ah in la helo nolol caafimaad leh, waana sababta aan u jeclahay in aan la socdo taariikhda cuntada iyo cuntada, maadaama aan ku siin karo talo fiican.